သူပျော်ရွှင်ဖို့ အတွက် ကျွန်တော် ဟန်ဆောင်ရတာပေါ့။ – Colour60
scxarlett 12th September 2018 21st September 2018 Colourful Knowledge, Colourful Love, Uncategorised
လူတစ်ယောက်ဟာ မိန်းမလှ တယောက်နဲ့ လက်ထပ် လိုက်တယ်။ ရုပ်လှတဲ့အပြင် စိတ်ထားကလည်းအရမ်းကောင်းတော့ အမျိုးသမီးကို အရမ်းချစ်ရှာတယ်။ တနေ့မှာ အမျိုးသမီး ဟာ အရေပြားရောဂါ စတင်ခံစားလာရတယ်။ အကြောင်း တိုက်ဆိုင်ချင်တော့ တရက်မှာ အမျိုးသား ကလည်း အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီး ထွက်ရတယ်။ ခရီး ကနေ အိမ်ပြန်လမ်းမှာ car accident ဖြစ်ပြီး မျက်စိနှစ်လုံးစလုံး ကွယ်သွားခဲ့တယ်။
ဒီနေရာမှာ ခဏလောက်ရပ်ပြီး စဉ်းစားကြည့်ရအောင်..အရေပြား ရောဂါသည် နဲ့ မျက်မမြင်တယောက် ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဟာ ဘယ်သို့ ဘယ်ပုံခရီးဆက်ကျမလဲ? ဘာတွေဆက်ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ……?
တကယ်တော့ သူတို့ ၂ ယောက်ကြားမှာ ဘာပြောင်းလဲမှု့မှမရှိခဲ့ပါဘူး။ အရင်လို ပျော်စရာကောင်း ပြီး ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေတုန်းပဲ။ အချိန်တွေ ကုန်လာတာနဲ့အမျှ အမျိုးသ မီးရဲ့ အရေပြား ရောဂါ ဟာလည်း တစတစနဲ့ ပိုဆိုးလာတယ်။ မျက်မမြင် ယောက်ကျားက သူမိန်းမ အရေပြားေ ရောဂါ ကြောင့်ရုပ်ပြတ် ဆင်းပြတ် ခံစားနေရတာကိုမသိရှာဘူးထင်ပါရဲ့။ သူတို့ ၂ ယောက်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဟာ ဟိုးးအရင်ကထက်တောင်တိုးပြီး ပိုလို့ ချစ်မြဲ ချစ်စဲ ကြင်နာစဲပဲ။
နောက်ဆုံးမှာတော့ အမျိုးသမီး ဟာ အရေပြား ရောဂါ နဲ့ ဆုံးသွားရှာတယ်။ သူ့အတွက်တော့ ကြီးကျယ်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုပဲလို့ခံစားရတယ်။မိရိုးဖလာအတိုင်း ဇနီး ရဲ့ အလောင်း ကို မြေချပြီးနောက်တနေ့ မှာ အမျိုးသား ဟာ ဇနီးသည် ခေါင်းချခဲ့တဲ့ မြို့ ကနေ အပြီးအပိုင်ထွက်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
အဲ့ချိန်မှာ အိမ်နီးနားချင်း လူတယောက်က စကားလှမ်းပြောတယ် ” ခင်ဗျား မျက်စိ မမြင်တဲ့ ကာလတလျှောက်လုံး ခင်ဗျားရဲ့ ဝေရာဝိစ္စတွေ အကုန်လုံးကို ခင်ဗျား အမျိုးသမီး က မငြီးမငြူ လုပ်ပေးခဲ့တာ အခု ခင်ဗျား တစ်ယောက်ထဲ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ..ခင်ဗျားတော့ ဒုက္ခ လှလှကြီးတွေ့တော့မယ်”
အမျိုးသား က ပြန်ပြောတယ်။ ” ဒီမှာ မိတ်ဆွေ..အမှန်က ကျွန်တော် မျက်စိ မကန်းပါဘူး။ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်နေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ အမျိုးသမီး ဟာ သူမရဲ့ ရုပ်ဆိုး အကြည်းတန်နေတဲ့ မျက်နှာ ကို နေ့တိုင်း ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်လို့ သူသိရင် အဲ့ခံစားမှု့ဟာ သူရောဂါဝေဒနာ ခံစားမှုထက်ပိုပြီး နာကျဉ်လိမ်မယ်။ ဒါကို ကျွန်တော်မမြင်ချင်ဘူး။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလှတော့ပေမဲ့ သူမ ရဲ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အမြဲလှနေသူတစ်ယောက်ပါ။ စိတ်ထားဖြူစင်သူတစ်ယောက်မို့ ကျွန်တော်အတွက် ဇနီးကောင်း တယောက်ပါ။ ကျွန်တော်က သူအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပြီး စိတ်ချမ်းသာနေတာကိုပဲ မြင်ချင်တဲ့လူတယောက် မို့ အခုလို ဟန်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
လောကကြီးမှာ ၂ ဦး ၂ ဖတ် ပြေလည် ကောင်းစားဖို့အတွက် တချို့သောအရာတွေကို မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ပေးရပါတယ်။ အားနည်းချက် ချွတ်ယွင်းချက်ဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိစမြဲ။ ဒါကြောင့် no one is perfect လို့ ဆိုကြတာကိုး။ လူတယောက်ရဲ့ အားနည်းချက် ချွတ်ယွင်းချက်ကို ထောက်ပြီး အနိုင်ယူတာ လူညံ့လူ့ပြော့ တွေရဲ့ လုပ်ရက်ပါ။ အဲ့ထဲမှာ ကိုယ်မပါမိပါစေနဲ့။ တစ်ယောက်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကိုတစ်ယောက်က အပြန်အလှန် ဖြည့်ဆည်းပေးရင်း ရင်ထဲက စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာ တရားနဲ့ သာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံကျမယ်ဆိုရင် အရမ်းပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တခု အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်လာမှာ သေချာပါတယ်။
Moral Story တစ်ပုဒ်ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ရေးထားတာပါ။
Credit : ZayerLynn (Okkan)
လူတဈယောကျဟာ မိနျးမလှ တယောကျနဲ့ လကျထပျလိုကျတယျ။ ရုပျလှတဲ့အပွငျ စိတျထားကလညျးအရမျးကောငျးတော့ အမြိုးသမီးကို အရမျးခဈြရှာတယျ။ တနမှေ့ာ အမြိုးသမီးဟာ အရပွေားရောဂါ စတငျခံစားလာရတယျ။ အကွောငျး တိုကျဆိုငျခငျြတော့ တရကျမှာ အမြိုးသားကလညျး အလုပျကိစ်စနဲ့ ခရီးထှကျရတယျ။ ခရီးကနေ အိမျပွနျလမျးမှာ car accident ဖွဈပွီး မကျြစိနှဈလုံးစလုံး ကှယျသှားခဲ့တယျ။
တကယျတော့ သူတို့ ၂ ယောကျကွားမှာ ဘာပွောငျးလဲမှု့မှမရှိခဲ့ပါဘူး။ အရငျလို ပြျောစရာကောငျး ပွီး ခဈြခဈြခငျခငျနတေုနျးပဲ။ အခြိနျတှေ ကုနျလာတာနဲ့အမြှ အမြိုးသမီးရဲ့ အရပွေားရောဂါဟာလညျး တစတစနဲ့ ပိုဆိုးလာတယျ။ မကျြမမွငျ ယောကျကြားက သူမိနျးမ အရပွေားရောဂါကွောငျ့ရုပျပွတျ ဆငျးပွတျ ခံစားနရေတာကိုမသိရှာဘူးထငျပါရဲ့။ သူတို့ ၂ ယောကျရဲ့ အိမျထောငျရေးဟာ ဟိုးးအရငျကထကျတောငျတိုးပွီး ပိုလို့ ခဈြမွဲ ခဈြစဲ ကွငျနာစဲပဲ။
နောကျဆုံးမှာတော့ အမြိုးသမီးဟာ အရပွေားရောဂါနဲ့ ဆုံးသှားရှာတယျ။ သူ့အတှကျတော့ ကွီးကယျြတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကွီးတဈခုပဲလို့ခံစားရတယျ။မိရိုးဖလာအတိုငျး ဇနီးရဲ့ အလောငျးကို မွခေပြွီးနောကျတနေ့ မှာ အမြိုးသားဟာ ဇနီးသညျ ခေါငျးခခြဲ့တဲ့ မွို့ ကနေ အပွီးအပိုငျထှကျသှားဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ။
အဲ့ခြိနျမှာ အိမျနီးနားခငျြး လူတယောကျက စကားလှမျးပွောတယျ ” ခငျဗြား မကျြစိမမွငျတဲ့ ကာလတလြှောကျလုံး ခငျဗြားရဲ့ ဝရောဝိစ်စတှေ အကုနျလုံးကို ခငျဗြားအမြိုးသမီးက မငွီးမငွူ လုပျပေးခဲ့တာ အခု ခငျဗြားတဈယောကျထဲ ဘယျလိုလုပျမလဲ..ခငျဗြားတော့ ဒုက်ခ လှလှကွီးတှတေ့ော့မယျ”
အမြိုးသားက ပွနျပွောတယျ။ ” ဒီမှာ မိတျဆှေ..အမှနျက ကြှနျတျော မကျြစိမကနျးပါဘူး။ မမွငျခငျြယောငျဆောငျနခွေငျးသာဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတော့ အမြိုးသမီးဟာ သူမရဲ့ ရုပျဆိုး အကွညျးတနျနတေဲ့ မကျြနှာကို နတေို့ငျး ကြှနျတျောမွငျနရေတယျလို့ သူသိရငျ အဲ့ခံစားမှု့ဟာ သူရောဂါဝဒေနာ ခံစားမှုထကျပိုပွီး နာကဉျြလိမျမယျ။ ဒါကို ကြှနျတျောမမွငျခငျြဘူး။ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာမလှတော့ပမေဲ့ သူမ ရဲ စိတျပိုငျးဆိုငျရာမှာ အမွဲလှနသေူတဈယောကျပါ။ စိတျထားဖွူစငျသူတဈယောကျမို့ ကြှနျတျောအတှကျ ဇနီးကောငျး တယောကျပါ။ ကြှနျတျောက သူအမွဲတမျးပြျောရှငျပွီး စိတျခမျြးသာနတောကိုပဲ မွငျခငျြတဲ့လူတယောကျ မို့ အခုလို ဟနျဆောငျရခွငျးဖွဈပါတယျ။
လောကကွီးမှာ ၂ ဦး ၂ ဖတျ ပွလေညျ ကောငျးစားဖို့အတှကျ တခြို့သောအရာတှကေို မမွငျခငျြယောငျဆောငျပေးရပါတယျ။ အားနညျးခကျြ ခြှတျယှငျးခကျြဆိုတာလူတိုငျးမှာရှိစမွဲ။ ဒါကွောငျ့ no one is perfect လို့ ဆိုကွတာကိုး။ လူတယောကျရဲ့ အားနညျးခကျြ ခြှတျယှငျးခကျြကို ထောကျပွီး အနိုငျယူတာ လူညံ့လူ့ပွော့ တှရေဲ့ လုပျရကျပါ။ အဲ့ထဲမှာ ကိုယျမပါမိပါစနေဲ့။ တဈယောကျရဲ့ လိုအပျခကျြကိုတဈယောကျက အပွနျအလှနျ ဖွညျ့ဆညျးပေးရငျး ရငျထဲက စဈမှနျတဲ့ မတ်ေတာ တရားနဲ့ သာ ပေါငျးသငျးဆကျဆံကမြယျဆိုရငျ အရမျးပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ ပတျဝနျးကငျြတခု အဖှဲ့အစညျးတခုဖွဈလာမှာ သခြောပါတယျ။
Moral Story တဈပုဒျကို ဆီလြျောအောငျ ဘာသာပွနျရေးထားတာပါ။
Previous မိန်းမ တွေ ချစ်လို့ မ၀နိုင်ဖြစ်ပြီး ဘယ်တော့မှ ပြစ်မသွားနိုင်တဲ့ လင် ဖြစ်ဖို့
Next ကိုယ်နဲ့ ဖူးစာ ပါမပါ ဘယ်လို တွက်ကြည့်မလဲအချစ်ရေး